स्वास्थ्य Archives - Page2of2- NepalTrending
तपाइँ हामीले अण्डालाई शक्ति वर्द्धक खानेकुराको रुपमा सेवन गर्दै आएका छौं । बच्च बच्चीलाई समेत अण्डलाई पोषिलो खानेकुराकोरुपमा नियमित खुवाउने गरिन्छ । तर आज समम्म भएका अण्डा विषयक कुनै पनि अनुसन्धानले अण्डाले...	Read more »
एजेन्सी । सवारी साधनामा यात्रा गर्दा तपाईंमध्ये धेरैलाई रिगटा लाग्ने र वान्ता हुने समस्या हुन सक्छ। कतिपय मानिस त झन् वान्ता भएकै कारण बिरामीसमेत हुन्छन्। बस, ट्याक्सी तथा हवाइजहाज चढ्दा अधिकाश मानिस...	Read more »
डण्डिफोर भोलि पल्ट निको पार्ने घरेलु औषधी ! जानी राखौ !
एजेन्सी : डण्डिफोर स्वास्थ्यका लागि भयंकर समस्या मानिदैन यद्धपी यसको आगमनले मानिसको आकर्षणमा चिसो पना पैदा गर्छ । अनुहारमा देखिने डण्डिफोले अनुहारको चमक नै हराइदिन्छ । त्यसैले कतिपय युवायुवतीहरु आफ्नो अनुहारमा...	Read more »
यी हुन भाग्यमानी नेपाली जसले पहिलो पटक लगाए कोरोनाविरूद्धको खोप
एजेन्सी- विश्वभर कोरोना भाइरसविरूको खोप बनाउने क्रम जारी छ । संसारमा कोरोना भाइरसविरूद्धको खोपमा अरू मुलुकलाई रसियाले उछिनी सकेको छ । बेलायत, अमेरिका, चीन, भारत लगायतका मुलुक अझै पनि खोप बनाउने होडबाजीमा...	Read more »
काठमाडौं । मानिसको शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने गुर्जो नेपालका जहाँसुकै रोप्न सकिने अमूल्य जडिबुटी हो । नेपालमा धेरै ठाउँमा घर वरिपरि वा गमलामा रोपेर नियमित प्रयोग गर्न सकिने लहरे जडिबुटी गुर्जो,...	Read more »
नेपालमा आज थप १ हजार ३ सय १३ संक्रमित भेटिए, कोरोना संक्रमितको संख्या ७० हजार नाध्यो
NepalTrending — September 25, 2020 add comment
काठमाडौं, ९ असोज । मुलुकमा थप १ हजार ३ सय १३ जनामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका बिभिन्न भागमा...	Read more »